Denizli Ski Centre mivezivezy amin'ny mpitsidika | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka20 DenizliDenizli Ski Center dia nandroaka mpitsidika
07 / 01 / 2020 20 Denizli, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
Nisy mpitsidika tany amin'ny toeram-pialan-tany marina
Pamukkale fotsy izay narahin'ny paradisa fotsy faharoa tao an-tanàna, ny Centro Ski Denizli, nandroaka ireo mpitsidika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Denizli Ski Center, izay ankafizin'ny mpitia ski indrindra, dia manao dingana hentitra ho lasa toerana mahamety indrindra amin'ny fanatanjahantena ririnina.
Iray amin'ireo tetikasa manan-danja indrindra napetraky ny Kaominin'i Metropolitan Denizli, ny Centre Ski Denizli dia safotry ny mpitsidika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Winter fanatanjahantena no voly ho an'ny tena hentitra kokoa amin'ny dingana mandroso mankany amin'ny lasa iray amin'ireo mpankafy an-toerana sy ny mpanao ski matihanina sy snowboarders izay te-fototra avy any amin'ny tanàna maro any Torkia. Denizli Ski Center, izay feno olona te-hahita oram-panala sy manao ski fa mahalala ny fahafahan'ny rivotra misokatra amin'ny faran'ny faran'ny herinandro, dia nahazo marika feno avy amin'ireo mpitsidika azy izay misy fantsom-bahaingo sy fitaovana ara-mekanika mety ho an'ny vao manomboka, mpanelanelana ary mpanotrona tsara. Ny foiben-toeran'i Aegean lehibe indrindra, izay manana ny fahafaham-po amin'ny filàny isan'andro, dia manome tombony lehibe amin'ny fanaovana ski miaraka amin'ny rafitry ny topografika sy ny endriny "kristaly" amin'ny ranomandry amin'ny toerana vitsivitsy eto amin'izao tontolo izao.
"Denizli hanao ny anarany amin'ny fizahan-tany ririnina"
Ben'ny tanànan'ny Denizli Metropolitan Osman Zolan dia nilaza fa tsy vahiny intsony amin'i ski ny vahiny manao ski sy nanampatra, dık Nanolotra fitaovana tsara tarehy ho an'ny faritany ambanivohitra izahay amin'ny resaka fizahan-tany. Tsy ny tanànantsika ihany no miasa fa ity mpitsidika kosa ity avy amin'ny lafivalon'ny firenena. Eo anilan'ny paradisa fotsy Pamukkale, i Denizlimiz dia fantatra ihany koa amin'ny fizahan-tany ririnina. Manolotra fampianarana ski eto izahay. Manantena aho fa eto dia hisolo tena ireo atleta izay hisolo tena ny fanambadiana sy ny firenentsika. ”
Araho izahay ho fampitandremana: deniz www.denizlikayak.com ”
Ny fampahalalana rehetra sy ny fanambarana momba ny Centre Ski Denizli I www.denizlikayak.co, Pejy facebook "Denizli Ski Center" sy ny kaonty instagram "denizlikayakmerkezi.20" dia azo arahana miaraka amin'ny fanamafisana ny maha-zava-dehibe azy, nikatona ilay zavamaniry tamin'ny 06 Janoary 2020 Alatsinainy noho ny oram-panala.
Distrika Tavas Denizli ao amin'ny faritr'i Nikfer 2 420 metatra ny haavon'ny Bozdag'da Denizli Ski Center, 75 kilometatra miala ny afovoan-tanàna. Ny toeram-pivarotana ski lehibe indrindra ao Aegean dia manana lalan-kely 13 izay manana halavam-potoana 9 kilometatra. Mpandeha sy matihanina mafana sy snowboarders izay te hanao karazana fitaovana rehetra ao amin'ilay trano, misy chairlifts 2, 1 chairlift ary fehikibo mandeha.
Tünektepe kabinetra fiara sy sôsialy
Tünektepe Cable Car dia nitsambikina tamin'ny mpitsidika
El Center de Ski Elmadağ dia nirohotra nankany amin'ireo olom-pirenena
Güzeltepe, nirohotra nankany Ski Lovers
Nanafika ny Denizli Car Car sy Bağbaşı Plateau ny mpitsidika
Denizli Ski Center facebook pejy